उहानबाट फर्किएको खुसी : ‘सरकारले गरेर देखायो’ – Health Post Nepal
२०७६ फागुन ४ गते १६:२८
उहानमा २० दिनदेखि कोठाभित्रै थुनिएका थियौँ । नेपालमा सबै तनावमा ग्रुजिरहेका थिए ।
त्यहाँ खानेकुरा पाइँदैनथ्यो, कहिलेकाहीँ भोकै बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । पानीको त सारै अभाव नै थियो । भाइरसको भय त झन् अकल्पनीय थियो ।
यस्ता कुराले हामी सबै एक किसिमको मानसिक तनावमा थियौँ ।
बाहिर निस्किन नपाइने, कतिवेला के हुने थाहा थिएन । संक्रमणको उच्च जोखिम थियो ।
यहाँबाट कहिले निस्कन पाइएला भनेर भगवान् पुकारिरहेका हुन्थ्यौँ ।
हिजो नेपाल आउने भनेपछि मनमा अब बाचिँयो भन्ने आशा पलायो । चीनबाट हिड्ँदा कतिवेला नेपाल पुगिन्छ जस्तो लागेको थियो । एयरपोर्ट उत्रिएपछि लामो सास फेरेर नेपाल सरकारलाई मनमनै धन्यवाद दिएँ ।
सबैजना डिप्रेसनमा जान लागेका थिए, अहिले सबै खुसी छन् । नयाँ जीवन पाएको अनुभव भइरहेको छ ।
चीनको अवस्था धेरै भयावह छ । कोही पनि आफ्नो कोठाबाट बाहिर निस्कन पाउँदैनन् । बाहिर भएको घटनाबारे केही थाहा हुँदैन ।
जंगलमा गएर पाल राखेरै बस्न पनि तयार छौँ भन्ने मानसिकता बनाएर आएका थियौँ । सरकारबाट धेरै आशा पनि गरेका थिएनौँ । सरकारले सक्छ कि सक्दैन भन्ने लागेको थियो, तर गरेर देखायो, खुसी लागेको छ । सोचेभन्दा निकै राम्रो व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई धन्यवाद !
१७५ जना नेपाल आएका छौँ । नेपाल आउन तयारी अवस्थामा रहनुभएका ५–६ जना आउन पाउनुभएन । शरीरमा ३७.३ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि तापक्रम देखिएपछि उहाँहरूलाई चीनमै राखियो । उहाँहरू अन्तिम समयमा आएर आउन नपाउनुभएकोमा दुःख लागेको छ ।
यहाँ आउनुभएका सबै जोखिमबाट मुक्त भइरहेको महसुस भएको छ । आज सबै जाँच भयो । यहाँ भएका कसैलाई पनि कोरोनाको लक्षण छैन जस्तो लाग्छ । चिनियाँ एयरपोर्ट, नेपाली एयरपोर्ट तथा यहाँ (क्वारेन्टाइनमा) आएपछि पनि चेकजाँच भएको छ ।
यहाँ एउटा कोठामा तीनजना बसेका छौँ । बेडसिट नयाँ छन् । तातोपानीको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले हामीले सोचेभन्दा राम्रो व्यवस्था गरेको रहेछ, खुसी छौँ ।
जंगलमा गएर पाल राखेरै बस्न पनि तयार छौँ भन्ने मानसिकता बनाएर आएका थियौँ । सरकारबाट धेरै आशा पनि गरेका थिएनौँ । सरकारले सक्छ कि सक्दैन भन्ने लागेको थियो । तर, गरेर देखायो, खुसी लागेको छ । सोचेभन्दा राम्रो व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई धन्यवाद छ ।
खानपानको व्यवस्था राम्रो छ । सबै खानेकुरा प्याकिङ गरेर आउँछ । सोचेभन्दा धेरै नै राम्रो व्यवस्थापन पाउँदा खुसी झन् थपिएको छ ।
(चीनको उहानबाट आएका डा. जितसिंह भण्डारीसँग हेल्थपोस्टकर्मी पुष्पराज चौलागार्ईंले गरेको कुराकानीमा आधारित । उनी अहिले खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइनमा छन् ।)
कोरोना भाइरस डिजिज (कोभिड–१९)